Magacaabista Abaalmarinta "Smart Communities" ee Guddoomiyaha Gobolka ayaa hadda furan - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Magacaabista Abaalmarinta “Smart Communities” ee Guddoomiyaha hadda way furan tahay
Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa lagu aqoonsadaa shaqada aadka u wanaagsan ee qorsheynta bulshada iyo horumarinta
Olympia, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku baaqday magacaabis loogu talagalay abaalmarinta sanadlaha ah ee 15 ee Gudoomiyaasha Abaalmarinta Bulshooyinka, barnaamij aqoonsan shaqada harsan ee dawladaha hoose iyo la-hawlgalayaashoodu ka leeyihiin qorshaynta bulshada ee muddada-dheer.
Ku guuleystayaasha abaalmarinta waxay bixiyaan aragtiyo xiiso leh oo ku saabsan qiimaha iyo mudnaanta muddada fog ee bulsho kasta iyada oo loo marayo qorshayaashooda sida ay doonayaan inay u ekaadaan una shaqeeyaan 20 ama xitaa 50 sano kadib. Beel keliya, waxay noqon kartaa mid xooga saareysa taageerida beeraha, mid kale ayaa mudnaanta siineysa dib u habeynta magaalada hoose - dhammaantood waxay u baahan yihiin aragti wadaag, go'aano adag iyo iskaashi.
"Inta badan waxaan maqalnaa waxyaabaha la isku haysto iyo doodaha ku lug leh qorsheynta bulshada iyo maareynta koritaanka," ayuu yiri Mark Barkley, Kaaliyaha Agaasimaha Ganacsiga, Qeybta Dowlada Hoose. “Abaalmarinta Bulshooyinka Smart waxay muujineysaa wada shaqeynta iyo shaqada adag ee deriska, beeraleyda, ganacsatada iyo saraakiisha dadweynaha sida ay u odorosayaan una dejinayaan qorshooyin si ay uga dhigaan bulshadooda mid firfircoon oo waarta kobaca dhaqaalaha.”
Faahfaahin iskaashi: Abaalmarinta abaalmarinta 2019 Tuulada Tukwila
"Tani waa qeexitaanka wada-shaqeyn guul leh oo dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay!"
- 2019 Caqli Bulsho
Mashruuca Tuulada Tukwila, oo sanadkii hore ku guuleystey abaalmarinta Smart Partnership Award, waa xarun dhaqameed iyo dhaqamo cusub oo cusub iyo xarun xaafadeed. Faa'iidooyinka la taaban karo ayaa durba u muuqda qaab goobo ganacsi, guryo aad u cufan oo dhaadheer, baarkinka la wadaago, maktabad dadweyne oo cusub iyo goob fagaare ah oo cusub oo loogu talagalay munaasabadaha bulshada iyo kulammada Qeybaha mashruuca ayaa iswaafajinaya oo si habsami leh ugaga gudbaya hal adeegsi mid kale. Naqshadayntu waxay u baahan tahay iskaashi socda, sidaa darteed magaalada Tukwila iyo la-hawlgalayaasheeda waxay qaateen qaab cusub waxayna ku heshiiyeen inay si wadajir ah u dhisaan Ururka Horumarinta Bulshada Tuulada Tukwila (TVCDA). Hadafka TVCDA waa in la wanaajiyo daryeelka bulshada ee bulshada deegaanka iyo dadka degan Tuulada Tukwila iyadoo kor loo qaadayo farshaxanka, horumarka dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, iyo dhismaha bulshada.
Akhriso waxbadan oo hore oo ku guuleysteyaasha Abaalmarinta Bulshada (hoos u rog si aad u hesho liiska sheekooyinka 2019 ee midig).
Abaalmarinta 2020-21 waxaa ka mid ah laba qaybood oo cusub oo lagu aqoonsanayo istiraatiijiyad sinnaanta iyo istiraatiijiyadda isbeddelka cimilada. Magacaabis ayaa la raadinayaa lixda qaybood ee soo socda:
Abaalmarinta Smart Vision qorshe dhameystiran, qorshaha subarea ama siyaasadaha qorsheynta gobolka oo dhan. Aqoonsiga guusha guusha ee degmo, magaalo, ama qorshe magaalo ama siyaasad loogu talagalay sameynta aragtideeda bulshada deegaanka. Tan waxaa lagu fulin karaa iyada oo wax laga badalayo qorshaha guud, qorshaha subarea ama siyaasadaha qorshaynta gobolka oo dhan, oo ay kujirto kaqeybgalka bulshada iyo gaarsiinta bulshada.
Abaalmarinta Mashruuca Smart mashaariicda fulinaya qorshe dhameystiran. Aqoonsiga mashruuc dowladeed oo guuleystey oo lagu hirgelinayo degmo, magaalo, ama qorshe ballaaran ee magaalada. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn, qaadashada xeerarka horumarinta, mashaariicda kaabayaasha, xarumaha bulshada, rakibaadda farshaxanka ee ay bulshada wadato, qalabaynta naqshadaha ama jardiinooyinka.
Abaalmarinta Iskaashiga Smart loogu talagalay mashruuc wadajir ah oo dadweyne oo fuliya qorshe dhammaystiran. Codsadeyaasha guuleysta waxay soo bandhigi doonaan wadajirka hirgelinta ee degmo, magaalo ama qorshe ballaaran ee deegaanka. Kuwaas waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidnayn, qorshooyinka shabakadda furan ee gobolka, istiraatiijiyadaha muddada-dheer ee dawladda-ka-dawladda, mashruucyada kaabayaasha ee ka faa'iideysanaya gobolka iyo iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Abaalmarinta Xeeladaha Guriyeynta Casriga ah qorshooyinka guriyeynta hal abuurka, siyaasadaha, barnaamijyada iyo / ama falalka. Codsadeyaasha guuleysta waxay soo bandhigi doonaan hal-abuurnimo iyo istiraatiijiyado hal-abuur leh si wax looga qabto awood-siinta guryaha iyadoo loo marayo qorshooyin, siyaasado, barnaamijyo, xeerar horumarineed iyo / ama tallaabooyin. Tusaale ahaan, qorshooyinka subarea ee kordhiya awooda guriyeynta, curiyaha cusub ee guryaha, ama siyaasadaha si gaar ah fiiro gaar ah ugu leh awooda, sinaanta iyo barakaca.
* CUSUB * Abaalmarinta Istaraatiijiyadaha Caddaaladda qorshooyinka, siyaasadaha, barnaamijyada iyo / ama ficillada wax looga qabanayo sinnaanta bulshada. Codsadeyaasha guuleysta waxay soo bandhigayaan adeegsiga farsamooyinka qorsheynta si wax looga qabto sinnaanta iyo ilaalinta dadka nugul, meelaha iyo nidaamyada. Tusaale ahaan, qorshooyin ama siyaasado si toos ah wax uga qabta yareynta saameynta sinaanta, oo ay kujirto barakicinta ama sharafeynta, iyo muujinta sida sinaanta loogu guuleystay, sida dib u noqoshada casriyeynta, soo-gaadhis la'aanta sunta, tayada hawada oo liidata ama kuleylka daran, cusbooneysiinta magaalooyinka iyo ka-saarista. aag ama siyaasado kale oo isticmaalka dhulka ah.
* CUSUB * Abaalmarinta Xeeladaha Isbadalka Cimilada qorshooyinka, siyaasadaha, barnaamijyada iyo / ama talaabooyinka wax looga qabanayo saamaynta cimilada bulshada. Codsadeyaasha guuleysta waxay soo bandhigayaan hal-abuurnimo iyo istiraatiijiyad hal abuur leh si wax looga qabto arrimaha maxalliga ah ee ay horseedka ka tahay cimilada sida dhaqsaha isu beddeleysa, sida dhacdooyinka heerkulka ba'an, daadadka ama halista dabka. Meelo kala duwan oo gobolka ka mid ah ayaa adeegsan doona aalado iyo istiraatiijiyado adag. Tusaale ahaan, ka hortagga dabka kaymaha ee ku yaal gobol bariga ka xiga cascades, ama magaalo xeebeed si xawli ah u koraya oo daadadka iyo dabaylaha duufaanku yihiin halista ugu caansan.
Magacaabista abaalmarinta Bulshooyinka Xariifka ah ee '2020-21' gudoomiyahoodu way furan yihiin July 27, 2021. Macluumaad dheeraad ah iyo foomamka magacaabista ayaa la helayaa halkan.
← Marka dib loo furayo, gobolka wuxuu bilaabayaa muraayada SmartWA si looga caawiyo ganacsiyada yaryar inay si nabad ah dib ugu furaan Maaddaama ganacsiyada ay fiirinayaan dib u furista iyo soo kabashada COVID-19, Ganacsiga wuxuu ku dhawaaqayaa barnaamijka amaahda cusub ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Flex Fund ee ganacsiyada yaryar ee Washington iyo kuwa aan macaash doonka ahayn →